तपाइँलाई धन प्राप्तीको संकेत यी १० सपना ले गर्छन् - ।। Naya Kuro ।।
२६ भाद्र २०७६, बिहीबार ०७:३७ September 12, 2019 Naya KuroLeaveaComment on तपाइँलाई धन प्राप्तीको संकेत यी १० सपना ले गर्छन्
७. सपनामा सुगाको तोता देख्नु निक्कै शुभ मानिन्छ। यसले धनप्राप्तिको संकेत गर्छ।
हरेक व्यक्तिले सुतेको समयमा सपना देख्नु एक सामान्य कुरा हो। हरेक दिन हामीले देखेको सपनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। प्राय मान्छेहरुले निन्द्राबाट बिउझिंदा आफूले देखेका सपनाहरु बिर्सिने गर्छन।
त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन।तिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको संकेत गर्ने गर्छ।
प्राय मान्छेहरु रातको समय मा देखेको सपना विहान उठ्नासाथ आफ्ना परिवारका अन्य सदस्यलाई सुनाउने गर्छन। यसरी आफूले देखेका सपना सुनाउने गर्दा क हुन्छ?
१.आफूलाई मृ’त अवस्थामा देख्नु भएमा:
२. हराभरा बगैंचा र रुखमा फल लागेको देखेमा:
३. सानो माछा देख्नु भएमा:
५. बलिरहेको दियोको साथमा भगवान प्रकट भएको देख्नु भएमा:
ताजा समाचार बाट /(पढेर सेयर गर्नुहोस)
आज २६ भाद्र २०७६ बिहिवार को राशिफल
२१ असार २०७६, शनिबार १६:२८ July 6, 2019 Naya Kuro